6 daan qaab galmoodka ah ugu tag xaaskaaga waa dhareereysaaye anaa hubo - iftineducation.com
6 daan qaab galmoodka ah ugu tag xaaskaaga waa dhareereysaaye anaa hubo
iftineducation.com – 6 daan qaab galmoodka ah ugu tag xaaskaaga waa dhareereysaaye anaa hubo
Cabsida ugu badan markasta oo galmo la sameynaya waxaa qaba ragga, nin kasta oo adduunka ku nool ayaana noloshiisa qeyb ka mid ah isweydiiya Isbuucii haddii uu ku fashilmi karo kulanka sariirta.
Hadaba, si cabsidaas meesha looga saaro. Ilbax.net waxay kuu heysaa lix waxyaabood oo ay tahay inaad sameyso si galmo ahaan aad markasta uga heer sarreyso xaaskaaga, maqaalkaan DR PAM SPURR ayaa ku daabacay majaladda The Sun ee dalka England. Halkaan ayaana kusoo koobi doonaa.
U SALAAX KINTIRKA – Waa kaarto aysan fahamsaneyn inta badan ragga casriga ah ee dunidaan ku nool, laakiin waxaa la isku raacsan yahay in shaqada iyo howsha rafaadka ah ee ay raggu isbidaan inta lagu jiro kulanka sariirta ay farahooda oo keliya ku xallin karaan iyagoo galmada tooska ah bilaabaya marka uu codsigu ka yimaado xaaskooda.
Xaaskaaga ka istiimi meelkasta oo jirkeeda ka mid ah, siiba kintirka
U BEDEL DAREENKA CAADIGA AH DAREEN GALMOOD – Inaad xaaskaaga ku booqato halka ay isku diyaarineyso mararka qaar qolka qubeyska isla markaana aad dareenkeeda oo dhan kusoo kiciso shaawarka ayaa ka mid ah farsamooyinka casriga ah ee galmada. Hubanti waxaa ah in galmada ku qabsoonta qolka qubeyska ay tayo ahaan iyo waqti ahaanba ka heer sarreyso galmooyinka caadiga ah.
Baashaalka shaawarka ayaa loo arkaa mid tayo badan heer galmoodka casriga ah
ISJIR MARKASTA DAREENKAAGANA XAKAMEEY – Dhaqdhaqaaqa dumarka ayaa ah waxa ugu badan ee dedejiya inay minidu kasoo fakato ragga ama ay biyo baxaan iyadoo aan la gaarin waqtigii uu qorsheystay. Laakiin inuu xakameeyo dareenkiisa inta baashaalka lagu jiro ayaa fure u ah inuu sameeyo galmo waqti dheer ah. Ugu yaraan qalbiga ka saar inaad howsha heyso oo jilliin oo keliya ka dhigo waxa aad sameyneyso.
Dhaqdhaqaaqa hablaha ayaa ah wax inta badan fashilka u keena ragga maanta
DUKAANKA GALMADA – Talladeenu ma ahan inaad isticmaasho kaniiniyaal xoojin kara tayo galmeedkaaga, balse waxaa jira qudaar sarre u qaadi karta tayo galmeedkaaga isla markaana badin karta minidaada, tusaale ahaan basasha cad.
Dukaameysiga galmada ayaa aad ugu yar dalkeena Somalia, halka adduunku uu nooga horreeyo
DAREENKAAGA BANNAANKA SOO DHIG – Inaad dareen ahaan joogto halka ugu sarreysa isla markaana ay arrintaasi ka muuqato indhahaaga iyo dhaqdhaqaaq ahaanba. Waxay keeni kartaa inay xaaskaagu kuusoo bandhigto dareenkeeda galmo ee ugu sarreeya, sida ay aaminsan yihiin dad badan oo wax ka yaqaana cilmi-nafsiga.
Dareenka aad ka muujiso indhahaaga ayaa keeni kara inaad ciyaarta sariirta kaga badiso xaaskaaga
SARRE U QAAD KALSOONIDAADA SARIIRTA – Waxaa hubanti ah inuu ninkasta u baahan yahay inuu kalsooni ahaan joogo halka ugu sarreysa isla markaana uusan niyadda ku heysan walwal ka dhan ah galmadiisa. Markasta oo aad adigu tahay hogaamiyaha ciyaarta sariirta isla markaana uu rabitaanka iyo dalabku kaa imaanayo heer galmeed ahaan waad ka sarreysaa xaaskaaga.
Kalsooni isku qab markasta, walwalkuna fashil ayuu keenaa markasta
galmada badan iyo dhibatada ay ledahay